Jarmalka Oo Ka Cadhooday Madaxweynaha Turkiga Oo Sawirro La Galay Ozil & Gundogan Iyo Canaan Kulul Oo Loo Jeediyey Ciyaaryahannada – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeAfricaWararka Somaliga AhJarmalka Oo Ka Cadhooday Madaxweynaha Turkiga Oo Sawirro La Galay Ozil & Gundogan Iyo Canaan Kulul Oo Loo Jeediyey Ciyaaryahannada
Jarmalka Oo Ka Cadhooday Madaxweynaha Turkiga Oo Sawirro La Galay Ozil & Gundogan Iyo Canaan Kulul Oo Loo Jeediyey Ciyaaryahannada
Xidhiidhka kubadda cagta waddanka Jarmalka ee magaciisa loo soo gaabiyo DFB ayaa si adag u cambaareeyey xiddigaha Mesut Ozil iyo Ilkay Gundogan oo baraha bulshada soo dhigay sawirro ay la galeen madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayiib Erdogan.
Labadan ciyaartoy ee heerka caalami oo ka mid ah laacibiinta uu tababare Joachim Low u xushay Koobka Adduunka ayaa waxay dhalasho ahaan kasoo jeedaan waddanka Turkey, waxaanay madaxweynahooda runta ah kula kulmeen magaalada London oo ay ku guddoonsiiyeen shaadhka kooxahooda oo saxeexan maalintii Axaddii.
Gündogan ayaa sawirka uu dhigay bartiisa bulshada waxa uu ku qoray hal kooban oo u dhignaa sidan: “Madaxweynahayga sharfan, ixtiraam weyn ayaan kuu hayaa”
Ozil ayaa isaguna bartiisa bulshada soo dhigay inkastoo aanu wax faallo ah raacinin, waxaase arrintan ay gadood ka kicisay gudaha Jarmalka oo aanay wakhtigan isku fiicnayn Turkiga, iyadoo xilligan uu madaxweyne Erdogan raadinayo inuu taageero weyn u helo ololihiisa doorashada oo uu markana doonayo in loogu celiyo.
Siyaasiyiin badan oo u dhashay waddanka Jarmalka ayaa dhaleeceeyey ciyaaryahanadan, waxaanay su’aal geliyeen qiyamka iyo aaminaadda labadan laacib ee dimuruqaadiyadda iyo ixtiraamka waddanka ay ka tirsan yihiin ee Jarmalka.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Jarmalka Reinhard Grindel ayaa waxa uu yidhi: “Kubadda cagta iyo xidhiidhka kubadda cagta Jarmalku waxay difaacayaan qiyamka aanu sida habboon u ixtiraamin Mr. Erdogan. Tani waa sababta ay tahay in aanay ciyaaryahanadayada caalamiga ah u ogolaanin ugu lug yeelanin ololihiisa doorashada. Mar haddii ay sameeyeen, ciyaaryahannadayadu hubaashii may caawinin shaqada isku-xidhnaanta ee xidhiidhka kubadda cagta.”
Halyeygii hore ee xulka qaranka Jarmalka ee Oliver Bierhoff oo hadda ah agaaasimaha xidhiidhka kubadda cagta dalkaas, ayaa waxa uu sheegay in labada ciyaartoy midkoodna aanu ogeyn qiimaha uu leeyahay sawirku, laakiin waxa cad in aanay sax ahayn, isla markaana ay kala hadli doonaa labadoodaba.
Markii uu dhallinyarada ahaa ee aanu soo gelin siyaasadda ee sannadihii 1990-meeyadii, Mr Erdogan waxa uu ciyaari jiray kubadda cagta oo uu ka tirsanaan jiray kooxda Kasimpasa, haddana waa siyaasiga ugu awoodda badan Turkey, waxaanu doonayaa in mar kale dib loo doorto 24 June oo uu doonayo madaxweynenimada inuu sii joogo, iyadoo muddo 15 sannadood oo hore uu ra’iisal wasaare iyo madaxweyne ahaa.
Xisbiga uu hoggaamiyo Erdogan ee AK Party oo ku ad-adag diinta Islaamka waxa lagu eedeeyaa inuu gacan bir ah ku qabtay mucaaradka iyo dadka kasoo horjeeda tan iyo markii uu fashilmay inqilaabkii July 2016 ee ay sameeyeen milaterigu, waxaana xabsiga loo taxaabay dad ka badan 50,000 qof oo lagu bartilmaameedsaday inay xidhiidh la leeyihiin wadaadka Fethullah Gulen ee Maraykanka fadhigiisu yahay ama kooxaha gooni-ugoosiga Kurdiyiinta. Dadka la xidhay waxa ku jira Wariyeyaal, Macalimiin, qareeno, shaqaale dawladeed iyo xubno mucaardka ka tirsan.